Ciisena, axdigii oofiyey, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Mid ka mid ah doodaha joogtada ah ee ka dhex jira culimada diinta ayaa ah: "Qaybtee ayaa ka mid ah sharciga Axdiga Hore la baabi'iyay oo waa kuwee qaybaha aan waajib ku nahay inaan sii haysano?" Jawaabta su’aashani maaha “mid ama”. Aan sharraxo.
Sharciga federaalka ee hore wuxuu ahaa xirmo dhameystiran oo ka kooban 613 sharciyada madaniga ah iyo kuwa diineed iyo amarrada reer binu Israa'iil. Waxaa loogu talagalay inay ka soocdo dunida oo ay aasaas u sameyso aasaaska ruuxiga ah ee horseedda rumaynta Masiixa. Waxay ahayd, sida Axdiga Cusubi leeyahay, oo ah hooska dhabta ah ee imanaya. Ciise Masiix , Masiixa , sharciga buu fuliyay.
Masiixiyiintu kuma hoos hoos jiraan sharciga Muuse. Hase yeeshe, waxay ku hoos jiraan sharciga Masiixa, oo lagu muujiyey jacaylka Ilaah iyo aadanaha kale. Waxaan idin siinayaa amar cusub oo ah inaad isjeclaataan sidaan idiin jeclaaday oo kale inaad isjeclaataan (Yooxanaa 13,34).
Intii lagu gudajiray wasaaradiisa dhulka, Ciise wuxuu arkay caadooyinka diinta iyo caadooyinka dadka yuhuudda, laakiin wuxuu ku hayaa dabacsanaan taas oo had iyo jeer la yaabeysa xitaa kuwa raacsan. Tusaale ahaan, wuxuu ka carooday mas'uuliyiinta diinta sida uu ula dhaqmay qawaaniintooda adag ee dhawrista sabtida. Markii loolan la galay, wuxuu caddeeyey inuu yahay Sayidka sabtida.
Axdigii Hore lama dhaafey; waa qayb muhiim ah oo ka mid ah Qorniinka. Waxaa jira sii waditaan u dhexeeya labada dardaaran. Waxaan dhihi karnaa in axdigii Ilaah loo bixiyay laba qaab: ballanqaad iyo dhammaystir. Waxaan hadda ku nool nahay sharciga axdiga Masiixa. Waxay u furan tahay dhammaan kuwa isaga rumeysan inuu yahay Sayid iyo Bixiyaha. Khasab maahan in la raaco xeerarka axdiga hore, oo laxiriira qaababka cibaadada iyo dhaqamada dhaqameed haddii aad rabto. Laakiin inaad tan samayso kama dhigayso inaad ka sii dhigatid mid xagga xaqdarro ah ama Ilaah ka aqbala kuwa aan oggolayn. Masiixiyiintu hadda waxay ku raaxaysan karaan "nasashada sabtida" - xorriyadda dembiga, dhimashada, sharnimada iyo ka fogaanta xagga Ilaah - xiriirka Ciise.
Tan macnaheedu waa waajibaadka ina saaran waa waajibaadka nimcada, dariiqa lagu noolaado iyo hoos imaadka ballanqaadyada nimcada leh iyo daacadnimadiisa. Addeeciddan oo dhammuna waxay tahay addeecidda rumaysadka, aaminaadda Ilaah, si aad ugu rumaysatid eraygiisa oo aad jidkiisa oo dhan ugu run noqoto. Addeeciddeena waligeed looma jeedin inay Eebbe ka dhigto naxariis. Isagu waa nimco badan oo waxaan dooneynaa inaan ku noolaano qaab aan ku helno nimcadiisa oo maalin walba nalagu siiyo Ciise Masiix.
Haddii badbaadadaadu ku xirnaato haddii aad sharciga fuliso, waxaad u malayn doontaa inaad guuldarraysato. Laakiin waad ku mahadsan kartaa, Ciise wuxuu kula wadaagayaa noloshiisa buuxda ee ku jirta awoodda ruuxiisa.